Ahoana ny fampiasan'ny orinasa entana entana entana? | Martech Zone
Alarobia, Jona 12, 2019 Alarobia, Jona 12, 2019 Douglas Karr
Raha toa ka misy indostria iray izay angon-drakitra an-taonina maro no misambotra tsy an-kijanona, dia ao amin'ny indostrian'ny Consumer Packaged Goods (CPG). Fantatry ny orinasa CPG fa zava-dehibe ny Big Data, saingy mbola tsy raisin'izy ireo izany amin'ny asany isan'andro.
Inona avy ireo entana fonosana ho an'ny mpanjifa?
Entana fonosana ho an'ny mpanjifa (CPG) dia zavatra ampiasain'ny mpanjifa antonony isan'andro izay mitaky fanoloana na famenon-javatra mahazatra, toy ny sakafo, zava-pisotro, akanjo, paraky, paraky, makiazy ary vokatra ao an-trano.
Araka ny Bedrock Analytics, ny entana fonosin'ny mpanjifa indostrialy dia tombanana hamokatra $ 2 tapitrisa tapitrisa isan-taona any Etazonia fotsiny. Misy mpanamboatra CPG an'arivony manandrana mivarotra marika an'aliny maro, ary entana aman'hetsiny ho 300 amin'ny mpivarotra lehibe. Raha ny marina, ny mpivarotra ambongadiny 5 mpivarotra no manamboatra mihoatra ny antsasaky ny varotra manontolo.
Ny mpivarotra dia mangataka fampahalalana bebe kokoa, fomba fijery ary torolàlana avy amin'ny mpanamboatra mba hanatsarana ny karazana vokatra sy hampitomboana ny varotra amin'ny sokajin'ny vokatra. Raha manana ny enti-trano ao an-trano ireo mpanamboatra CPG lehibe kokoa hanaterana ireo fomba fijery ireo, ny ankamaroan'ny mpanamboatra bitika sy antonony dia tsy.
Bedrock Analytics manampy ireo mpanamboatra CPG hampiasa ny herin'ny analytics amin'ny data mba hitomboan'ny fitomboana ary handresena toerana malalaka. Nahaliana ny ekipa tao raha sy ny fomba ampiasain'ny matihanina CPG ny angon-drakitra arak'izy ireo.
Nanjary ilaina ny data mba handraisan'ny orinasa CPG fanapahan-kevitra mahomby. Ny tena zava-misy dia ny ampahany betsaka amin'ny mpanamboatra CPG no manohy miady amin'ny fanadihadiana data. Ilaina maika izany izay hitohizan'i Bedrock - na amin'ny alalàn'ny fikarohana toy izao, na amin'ny alalàn'ny sehatra an-tserasera momba ny angona AI.
Will Salcido, CEO an'ny Bedrock Analytics
Ny mahavariana dia mampiseho fa ny ankamaroan'ny fikambanana CPG dia manana fidirana amin'ny angon-drakitra, saingy tsy dia mahazo aina firy amin'ny fanaparitahana ireo angona ho valiny azo zahana. Mampalahelo izany, satria ny angon-drakitra dia manakiana ny ankamaroan'ny fanapahan-kevitra anatiny, ao anatin'izany:
Marketing sy marika
Fampahafantarana ireo mpividy
Fampahafantarana ireo mpanatanteraka
Nanadihady ny safidin'ireo matihanina CPG izy ireo ary nanangana ny valin'ny fanadihadiana tamin'ity sary azo ampiasaina sy manazava ity.
Tags: analytics eo am-pototryentana fonosin'ny mpanjifa-barotrafisondrotana